Microsoft Outlook - ဝီကီပီးဒီးယား
တမ်းပလိတ်:Latest stable software release/Microsoft Office
16.50 (Build 21061301) / ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၂၁; ၁၂ လ အကြာက (၂၀၂၁-၀၆-15)
4.2121.2 / ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၂၁; ၁၂ လ အကြာက (၂၀၂၁-၀၆-17)
4.2123.3 / ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၂၁; ၁၂ လ အကြာက (၂၀၂၁-၀၆-17)
Microsoft Outlook သည် မိုက်ခရိုဆော့မှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် တစ်ကိုယ်ရေအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းသည့်ဆော့ဝဲစနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ Microsoft Office suite ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မူလက အီးမေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Outlook တွင် ပြက္ခဒိန်နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အဆက်အသယ်မှတ်တမ်းများ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ မှတ်စုမှတ်သားခြင်း၊ journal logging နှင့် ဝဘ်ရှာဖွေမှုများ စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လူများစွာသည် Outlook ကို stand-alone အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအနေနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အသုံးပြုသူများသည် လူများစွာအသုံးပြုနိုင်သည့် ဆော့ဝဲများဖြစ်ကြသည့် Microsoft Exchange Server နှင့် SharePoint များကို အသုံးပြုကာ mailboxes, calendars, folders, data aggregation စသည့် မျှဝေကာလုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ မိုက်ခရိုဆော့သည် အန်းဒရွိုက်နှင့် iOS အပါအဝင် မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများအတွက် အပ်များ (apps) ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဝင်းဒိုးဖုန်းများသည် Outlook အချက်အလက်များအားလုံးနီးပါးကို Outlook Mobile ဆီသို့ Sync လုပ်နိုင်သည်။ Microsoft Visual Studio ကို အသုံးပြုကာ တီထွင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆော့ဝဲများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် Outlook နှင့် Office ဆော့ဝဲများဖြင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် မိုက်ခရိုဆော့သည် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကို ကြေညာခဲ့ပြီး ၎င်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများအတွက် Teams platform တွင် အလုပ်လုပ်ဆောင်သည်။ စကားပြောဆိုမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ယခုအခါတွင် တွဲဖက်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်ထားသည်။ ၎င်းသည် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အုပ်စုဖွဲ့လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ပလက်ဖောင်းကိုလည်း go-to company chat-platform အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
၁ Web Applications
၂.၁.၁ Outlook 2002
၂.၁.၂ Outlook 2003
၂.၁.၃ Outlook 2007
၂.၁.၄ Outlook 2010
၂.၁.၅ Outlook 2013
၂.၁.၆ Outlook 2016
၂.၁.၇ Outlook 2019
၂.၃ ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များ
၃ Internet standards compliance
Outlook.com သည် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည့် Microsoft Outlook ၏ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည့် ဝဘ်မေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ယခင်က hotmail ဟု သိကြပြီး ၎င်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် outlook.com အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Outlook on the web (ယခင်က Exchange Web Connect, Outlook Web Access, and Outlook Web App စသဖြင့် ခေါ်ကြ) သည် Microsoft Outlook ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ဝဘ်ဗားရှင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Office 365, Exchange Server, နှင့်Exchange Online စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
Outlook ကို မိုက်ခရိုဆော့၏ ယခင် scheduling, email clients, Schedule+ နှင့် Exchange Client များနေရာတွင် အစားထိုးခဲ့သည်။ Outlook 98 နှင့် Outlook 2000 သည် အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Internet Mail Only (aka IMO mode): POP3, IMAP အကောင့်များအတွက် ပေါ့ပါးစွာအလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ပေါ့ပါးသည် Fax အက်ပလီကေးရှင်းလည်း ပါဝင်သည်။
Corporate Work group (aka CW mode): full MAPI client တစ်ခုဖြစ်ကာ မိုက်ခရိုဆော့ Exchange Accounts ပေါ်တွင် အဓိက အလုပ်လုပ်သည်။
• အစဉ်မပြတ် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် Microsoft Outlook ဗားရှင်းများမှ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
Version number[lower-roman ၁]
15.3 October 31, 2014 Included in Office 365, except someတမ်းပလိတ်:Which commercial editions
15.12 September 25, 2015 Included in Office 2016 and Office 365
16.17 September 24, 2018 Included in Office 2019 and Office 365
1.3 2015 Included in Office 365, except someတမ်းပလိတ်:Which commercial editions
Outlook 2002 တွင် အောက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်။
True Dark Mode (version 1907 onward)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ပထမဆုံးအဖြစ် Acompli က ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ venture capital-backed startup သည် venture capital-backed startup ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် မိုက်ခရိုဆော့သည် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Acompli ကို Outlook Mobile ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Outlook Mobile သည် Microsoft Outlook desktop ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် Outlook.com အီးမေးဝန်ဆောင်မှု စသည်တို့နှင့် မျှဝေကာ အသုံးပြုသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် မိုက်ခရိုဆော့သည် မိုဘိုင်းနှင့် တက်ဘလက်အတွက် Office 365 နှင့်အတူ Outlook ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤသည်ပလက်ဖောင်းများအတွက် အီးမေး၊ ပြက္ခဒိန်နှင့် အဆက်အသွယ်များနှင့်အတူ ပထမဆုံး Outlook ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် မိုက်ခရိုဆော့သည် Sunrise Calendar ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် Sunrise ကို ရပ်နားခဲ့ပြီး Outlook Mobile တွင် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်း Outlook တွင် ပြက္ခဒိန်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာမှာကဲ့သို့ပင် Outlook mobile သည်လည်း loud storage တွင် သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ဖိုင်များကို တွဲကာ ပေးပို့ခြင်းများ လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့ပြင် ဤအပ်တွင် Outlook.com, Microsoft Exchange and Google Workspace (formerly G Suite) တို့အပါအဝင် အခြားအီးမေးပလက်ဖောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးထားသည်။
Internet standards compliance[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Update history for Office for Mac။
↑ Microsoft Outlook APKs။
↑ Microsoft Outlook (in en-us)။
↑ Microsoft Outlook Life-cycle Information။
↑ HTML Mail with Microsoft Outlook။ 1 February 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ OL98: How to Troubleshoot Active Setup Problems in Windows 98, 98 SE or ME (January 29, 2007)။
↑ Microsoft Outlook 2002 Product Guide (DOC)။ Microsoft (May 30, 2001)။
↑ Microsoft Outlook 2002 Performance Tuning (DOC)။ Microsoft (June 7, 2001)။
↑ OL2002: Users Can Read Nonsecure E-mail as Plain Text။ Support။ Microsoft။
↑ Mosher၊ Sue (August 26, 2002)။ Office XP SP2 Brings Changes to Outlook။ Windows IT Pro။ Penton။
↑ Mosher၊ Sue (March 25, 2004)။ Tighter Security in Outlook 2002 SP2။ Windows IT Pro။ Penton။
↑ Microsoft Office 2003 Editions Product Guide (DOC)။ Microsoft (September 2003)။4November 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Harkins၊ Susan (April 22, 2008)။ How do I... Avoid e-mail spam using Outlook tools?။ TechRepublic။ CBS Interactive။ 24 December 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rist၊ Oliver (August 20, 2004)။ You have nothing to fear from Office 2003 SP1။ InfoWorld။ IDG။
↑ Yegulalp၊ Serdar။ Microsoft Office 2003 SP2's antiphishing filter for Outlook။ SearchExchange။ TechTarget။ 1 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What's new in Microsoft Office Outlook 2007။ Support။ Microsoft။
↑ Bruzzese J.၊ Peter (February 4, 2008)။ Outlook 2007 vs. Outlook 2003။ Windows IT Pro။ Penton။
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ Discontinued features and modified functionality in Outlook 2007။ Support။ Microsoft။
↑ Outlook Mobile Service - How it works? Advantages? Features?။ MSDN။ Microsoft (April 9, 2008)။
↑ Posey၊ Brian (April 21, 2009)။ How Windows Desktop Search works in Microsoft Outlook 2007။ SearchExchange။ TechTarget။ 27 September 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ Chapter 2: Outlook asaPlatform။ MSDN။ Microsoft (2007)။
↑ What's new in Microsoft Outlook 2010။ Support။ Microsoft။ 11 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What's new in Outlook 2016 for Windows။
↑ What's new in Outlook 2019။
ကိုးကား အမှား - <ref> tags exist foragroup named "lower-roman", but no corresponding <references group="lower-roman"/> tag was found
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Outlook&oldid=733461" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၂၁:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။